जल शाहको रोषः आफ्नो नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमै बस्नुपर्छ ? – Khabar Silo
हाल अमेरिकामा रहेकी कुनै बेलाकी चर्चित नायिका जल शाहले आफ्नो नेपाल आमालाई माया गर्न नेपालमा नै बस्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्दै रोष व्यक्त गरेकी छिन् ।
यसबारे उनले प्रश्न सोधेकी छिन्, ‘ उनीहरूलाई ,मलाईं जस्तै देशप्रतिको कर्तव्य, सम्मान र प्रेम देखाउन कसैको अनुमति चाहिन्छ र ? देशमा जुनसुकै विपत्ति आइपर्दा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू एक भएर अगाडि बढेका छन् ,सहयोगका लागि । ’
उनले नेपालीको पनि दुईवटा जात हुन्छ र भनेर प्रश्न सोधेकी छिन् । निकै कडा शब्दमा उनले लेखेकी छिन्, ‘ नेपालमा बस्ने नेपालीहरुको रगतको रंग गाढा रु नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरुको रगतको रंग फिक्का रु नेपालीको पनि दुइवटा जात हुन्छ र रु के बाहिर वस्ने नेपाली , नेपाली नै होइनन्रु देशमा बसेर ठूलो ठूलो गफ हाकेर आफ़नो देशलाई ठग्न र नङ्ग्याउन हामीलाई त आउदैन । हामीलाई आफ्नो देश रक्षाको लागी मर्न चाही आउँछ । ’
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला आफुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दैछ भन्ने थाहा पाएकी रामकुमारीले बुधवारको कार्यक्रममा फरक शैली प्रस्तुत गरिन् । उनी मुखमा कालो टेप टाँसेर मञ्चमा पुगेकी थिइन्।प्रतिगमन मुर्दावाद लेखिएको कपडा लगाएकी उनले भाषण गर्न माइक अगाडी पुग्नु अघि त्यो लुगा फुकालिन् । मञ्चमा पुगेर मुखको माक्स खोलिन् । तर […]
दोस्रो तलावाट हा’म फा’लेर भागेकी श्रीमती युट्युवरको सहयोगमा सम्पर्कमा आएपछि श्रीमानले युट्युवरलाई धन्यवाद दिएका छन् । दुई श्रीमान श्रीमतीबीच जब कुनै तेस्रो ब्यक्तिको प्रवेश हुन्छ त्यसपछि दुई जनाको सम्बन्धमा तिक्तता आउन थाल्छ । दोस्रो तलावाट हा’म फा’ले’र लुकेकी श्रीमती सम्पर्कमा आइन् त्यसका लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उनले भने । श्रीमतीलाई उनले पहिल्यै देखि शंका […]
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आइतबारदेखि भौतिकरुपमा नै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कराण गत वैशाखको दोस्रो सातादेखि बन्द रहेका विद्यालय भौतिकरुपमा खोल्ने निर्णय भएको हो । कामपा शिक्षा विभागको बुधबार बसेको बैठकले विद्यालय खोल्ने अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । कामपा शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार भौतिकरुपमा […]